Xeer-ilaalinta qaranka oo dacwado musuq-maasuq ah kusoo oogtay 20 mas’uul oo ka tirsan DF gaar ahaan xukuumada kheire. – Soomaali 24 Media Network
Xeer-ilaalinta qaranka oo dacwado musuq-maasuq ah kusoo oogtay 20 mas’uul oo ka tirsan DF gaar ahaan xukuumada kheire.
Posted on May 16, 2020 Leave a Comment on Xeer-ilaalinta qaranka oo dacwado musuq-maasuq ah kusoo oogtay 20 mas’uul oo ka tirsan DF gaar ahaan xukuumada kheire.
MUQDISHO-SOOMAALI24-Xafiiska Xeer Ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay shakhsiyaad loo xiray musuq-maasuq kasoo billowday wasaaradda caafimaadka, balse ku baahay wasaarado kale.
Xafiiska Xeer ilaaliyaha guud ayaa sheegay inay hayaan caddeymo ku aadan musuq-maasuqaas, waxaana caddeymaha la hayo lagu sheegay inay kamid yihiin rasiidyo, Jeegag iyo heshiis la sheegay in loo diyaarsaday sidii lacago loogu musuq-maasuqi lahaa.
Xeer ilaalinta ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay soo gaba-gabeysay baaritaan waqti dheer qaatay oo la xiriirto kiiska musuq-maasuqa ee wasaaradda Caafimaadka, wuxuuna Dr. Suleymaan sheegay inay dacwad kusoo oogeen shakhsiyaadka la haysto una gudbiyeen maxkamadda awoodda u leh dacwadaan iyadoo laga sugayo in waqti loo qabto
← Ururka Al-shabaab oo shegtay in ay dilen ciidamo badan oo kenyaan ah
AKHRISO-Somaliland oo fasaxday Qaadka oo hore ay muddo bil ah u mumnuucday. →